FILE - Health workers test a migrant domestic worker from Africa for the coronavirus disease at a hotel, before she travels back to her country, in Beirut suburbs, Lebanon, Oct. 5, 2020.
Bazi rezvehutano rinoti nemusi weChitau vanhu mazana matatu vakabatwa nechirwere cheCovid-19 mumwe chete akafa zvinonzi nenyanzvi munyaya dzezvehutano munongedzo wekuti chirwere ichi chave kupararira zvinotyisa.
Munhu akafa ari kuMidlands zvasvitsa huwandu hwevanhu vafa pamazana matatu nemakumi matanhatu kana kuti 360.
Huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi hwasvika pazviuru gumi nezvitatu zvine mazana matanhatu nemakumi maviri nevashanu kana kuti 13, 625.
Pavanhu mazana matatu vakabatwa nechirwere ichi neChitatu ava, mazana maviri nemakumi masere nevanomwe kana kuti 287 vakachitapurirwa munyika, vana vakabva kuSouth Africa, vapfumbamwe kuBotswana.
Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi zvuru gumi nechimwe zvine zana nemakumi mashanu nevana kana kuti 11, 154 mushure mekunge vanhu makumi masere nevanomwe vabatwa nechirwere ichi. Vanhu vachiri kurwara zviuru zviviri zvine gumi nemumwe kana kuti 2,111.
Kunyangwe hazvo chirwere cheCovid-19 chave kupararira zvakanyanya, mutungamiri weZimbabwe Nurses Association VaEnoch Dongo vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara sezvo vakoti navanachiremba vachiti havana zvikwanisiro uye vachishanda mazuva mashoma nekuda kwemari shoma dzavari kutambiriswa nehurumende.
Mutevedzeri wemutungamir wenyika vari gurukota rezvehutano zvekare VaConstantino Chiwenga vakati hurumende haina mari iri kutodawo rubatsiro kubva kune vekunze.
Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nezvuru mazana manomwe kana kuti 2, 7 million vabatwa nechirwere cheCovid-19 muAfrica.
Vanhu vafa vasvika zvuru makumi matanhatu nevana zvine mazana manomwe nemakumi matanhatu kana kuti 64, 760. Vapora vadarika mamiriyoni maviri nezvuru mazana maviri kana kuti 2,2 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica.
Huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni makumi masere nemaviri ane zviuru mazana masere kana kuti 82, 8 million.
Vafa muAmerica vanodarika zviuru mazana matatu zvine makumi mana nemaviri kana kuti 342, 000, vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni gumi nemanomwe kana kuti 19, 7 miillion.
Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere kana kuti 1, 8 million. Asi vapora pasi rose vachidarika mamiriyoni makumi mana nematanhatu ane zvuru mazana masere kana kuti 46, 8 million.